အာဆင်နယ် အသင်းကို ရောင်းချသွားမှာ မဟုတ်ကြောင်း အတိအလင်း ပြောကြားလိုက်တဲ့ ဂျိုရှ့်ခရွန်ကီ - xyznews.co
အာဆင်နယ် အသင်းကို ရောင်းချသွားမှာ မဟုတ်ကြောင်း အတိအလင်း ပြောကြားလိုက်တဲ့ ဂျိုရှ့်ခရွန်ကီ
အာဆင်နယ် အသင်းရဲ့ ပိုင်ရှင် စတန် ခရွန်ကီ ရဲ့ သားလည်း ဖြစ်သလို ၊ အသင်းရဲ့ဒါရိုက်တာလည်း ဖြစ်တဲ့ ဂျိုရှ့် ခရွန်ကီ က အာဆင်နယ် အသင်းကို ရောင်းချဖို့ အစီအစဉ် လုံးဝ မရှိကြောင်း ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောကြား သွားခဲ့ပါတယ် ။
လက်ရှိမှာ အာဆင်နယ် အသင်းကို ဝယ်ယူဖို့ Spotify ပိုင်ရှင် ဒန်နီရယ်အက် က စိတ်ဝင်စားနေပါတယ် ။ အက်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလမှာ ဥရောပ စူပါလိဂ် ပြဿနာ ပေါ်ပေါက်ပြီးနောက် ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ် အာဆင်နယ် အသင်းကို ဝယ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားကြောင်း တရားဝင် ထုတ်ဖော် ပြောကြား ထားသူပါ ။
Spotify ရဲ့ CEO ဒန်နီရယ် ဟာ မေလ အတွင်းမှာ အာဆင်နယ် အသင်းကို ဝယ်ယူဖို့ ပထမအကြိမ် ပေါင် ၁.၈ ဘီလီယံ နဲ့ ကမ်းလှမ်းမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး Kroenke Sports & Entertainment က ပယ်ချ ခဲ့ပါတယ် ။
ဒန်နီရယ်အက်ဟာ အာဆင်နယ် အသင်းကို ငယ်စဉ်ကတည်းက အားပေးတဲ့ အမာခံ ပရိသတ် တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ် ။ အက် ဟာ ဂန်းနား ဂန္တဝင်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး အာဆင်နယ် အသင်းကို ဝယ်ယူဖို့ ကြိုးပမ်း အားထုတ်နေတာပါ ။
အာဆင်နယ် အသင်း ဒါရိုက်တာ ဂျို့ရှ်ခရွန်ကီ ကတော့ အသင်းကို ဝယ်ယူဖို့ ကြိုးပမ်း နေသူတွေအပေါ် ရောင်းချသွားမှာ မဟုတ်ကြောင်း တုန့်ပြန် ပြောကြား လိုက်ပါတယ် ။ ” ကမ္ဘာပေါ်က အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံက ကျွန်တော်တို့ အသင်းကို ဝယ်ယူဖို့ တစ်ချိန်လုံးကြိုးပမ်း နေကြပါတယ် ၊ ဒါကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အာဆင်နယ် အသင်းရဲ့ အင်အားကြီးမားမှုကို သိနိုင်ပါတယ် ။ ”
” အာဆင်နယ် က global brand တစ်ခုပါ ၊ အသင်းကို ဝယ်ယူဖို့ ကြိုးစားနေသူတွေကို ကျွန်တော် စကားတစ်ခုနဲ့ပဲ တုန့်ပြန်ချင်ပါတယ် ၊ အသင်းက ရောင်းရန် လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး ၊ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဆောင်နေတာ ခုမှ အစပဲ ရှိပါသေးတယ် ၊ ရှေ့လျှောက် တိုးတက်အောင် အများကြီး လုပ်ဆောင် သွားဦးမှာပါ ။ ”
” ကျွန်တော်တို့ ဒီအသင်းကို အပြည့်အဝ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှပါ ၊ ကျွန်တော်တို့မှာ ငယ်ရွယ်တဲ့ နည်းပြ ငယ်ရွယ်တဲ့ ကစားသမား အစုအဖွဲ့ကို ပိုင်ဆိုင် ထားပါတယ် ၊ အသင်းရဲ့အနာဂတ်အတွက် အစီအစဥ် သေချာဆွဲပြီး လုပ်ဆောင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ”
” အမေရိကန် က ကျွန်တော်တို့ ပိုင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ model တစ်ခုစီ ခိုင်ခိုင်မာမာ ရှိကြပါတယ် ၊ အာဆင်နယ်မှာလည်း ဒီလို ရှိဖို့ အတွက် လုပ်ဆောင် နေပါတယ် ။ ပြီးခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်ကနေ အခုချိန်အတွင်းမှာလည်း အသင်းမှာ စိတ်ဓတ် ခံယူချက်ကောင်းတဲ့ လူငယ်ကြယ်ပွင့်တွေ အရည်အသွေးမြင့် ကစားသမားတွေ ထွက်ပေါ် လာခဲ့ပါတယ် ။ ”
” ပရို အားကစားတွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ အသင်းတိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်းတွေအတွက် စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်ပေးနေကြသူတွေရဲ့ လုပ်အားကိုလည်း ချီးကျူး ဂုဏ်ပြုရမှာပါ ။ အာဆင်နယ် အသင်း အတွက် တကယ့်ကို ထူးကဲတဲ့ အချိန်ကာလတစ်ခု ရောက်လာတော့မှာပါ ။ ” လို့ ပြောကြား သွားခဲ့ပါတယ် ။
‘ အင်္ဂလန်မှာ ကျွန်တော် လုံလောက်တဲ့ လေးစားမှု မရခဲ့ပါဘူး ‘ – ကော်တွိုက်စ်
တုနှိုင်းမမီ အန်ဆယ်လော့တီ ၊ ရိုနယ်ဒို ကို လိုက်မီသွားတဲ့ သူတို့ ၉ ယောက် နဲ့ . . . ချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ် ပွဲက စိတ်ဝင်စားစရာ အချက်များ
Previous Article Young Gunners တို့ရဲ့ Epic Comeback ၊ ထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ EPL နည်းပြ ၊ ရီးရဲ တောင်ပံကစားသမားကို စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ မန်ယူနိုက်တက် တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
Next Article ဒါဘီပွဲ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်ကို ဟာသလုပ်လိုက်တဲ့ ဂယ်ရီ လိုင်နီကာ